မေတ္တာသုတ် အကြောင်း - CeleLove
August 16, 2019 Cele Love ဘာသာရေး 0
မေတ္တာသုတ်ကို နားလည်ပြီးမှ ရွတ်ရတာ ပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိထားသင့်သောမေတ္တာသုတ် ၊ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပွားများခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့်မေတ္တာသုတ်ကျင့်သူများ လိုက်နာရန် များကို တင်ပြ လိုက်ပါတယ် ….. ။
၁။ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ၊နေ၀ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ။ယဥှိ စေ၀ါနုယုဉ္ဇန္တော၊ရတ္တိန္ဒိဝ မတန္ဒိတော။
မေတ္တသုတ်ပရိတ်တော်၏ တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ကြောင့် ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သော ဘီလူး သရဲစသော နာနာဘာဝတို့သည် မခြောက်လှန့်နိုင်ကြကုန်၊ ယင်းသုတ်ကို နေ့ညမပြတ် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်သောသူသည်…
၂။ သုခံ သုပတိ သုတ္တော စ၊ပါပံ ကိဉ္စိ န ပဿတိ။ဧ၀မာဒိ ဂုဏူပေတံ။ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
ချမ်းသာစွာ အိပ်ပျော်ခြင်း၊ အိပ်နေစဉ်လည်း အိပ်မက်ဆိုးများ မမြင်မက်ခြင်းစသော အကျိုးဂုဏ်များရှိသောကြောင့် – အို သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ငါတို့ ရွတ်ဆိုကြပါစို့…
၃။ကရဏီယ မတ္ထကုသလေန၊ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမေစ္စ။သက္ကော ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊သုဝစော စဿ မုဒု အနတိမာနိ၊
အကျိုးစီးပွားလိုလား၍ လိမ္မာကျွမ်းကျင်သောအမျိုးကောင်းသား၊ အမျိုးကောင်းသမီးတို့သည် ငြိမ်သက်အေးချမ်းသော နိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်တို့ကို အာရုံပြုကာ ယခုကဲ့သို့မေတ္တာပွားမှုကို ပြုသင့်ပါပေ၏၊ ထိုသို့ မေတ္တာပွားလိုသူသည် တစိုက်မတ်မတ်စွမ်းနိုင်အောင် ပွားများအပ်၏၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရိုးသားဖြောင့်မတ်သင့်၏၊ အလွန် ရိုးဖြောင့်သူ ဖြစ်သင့်၏၊ ဆုံးမလွယ်သူ၊ သူတပါး၏စကားကို နာခံလွယ်သူဖြစ်ပြီး ကိုယ်နှုတ်နှလုံး သိမ်မွေ့ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်းမာန်မာနလဲ မထားသင့်ပေ …. ။
၄။ သန္တုဿကော စ သုဘရော စ၊အပ္ပကိစ္စော စ သလ္လဟုက၀ုတ္တိ။သန္တိန္ဒြိယော စ နိပကော စ၊အပ္ပဂဗ္ဘော ကုလေသွ န နုဂိဒ္ဓေါ။
စားသောက်စရာ၊ နေစရာအရာရာတို့တွင် ရှိသမျှဖြင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲလွယ်သူ ဖြစ်သင့်၏၊ ကိုယ့်ဝမ်းတခါးအတွက် လွယ်လင့်တကူပေ့ါပါးစွာ အသက်မွေးနိုင်သူလည်း ဖြစ်သင့်၏၊ အပိုဗာဟိရ ကိစ္စ နည်းပါးနိုင်သလောက် ကျင့်သုံးသင့်၏၊ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါနေသကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်၏၊ ထို့ပြင်သာမက မျက်စိ၊ နားစသော ဣနြေ္ဒငါးပါးကို ထိန်းသိမ်းသူ၊ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သူ၊ ဥာဏ်ပညာဖြင့် ချင့်ချိန်နိုင်သူလည်း ဖြစ်သင့်၏၊ ကိုယ့်နင့်ဆက်စပ်သော သူအားလုံးတို့အပေါ်၌ တွယ်တာမနေသင့်ပေ …. ။
၅။န စ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဉ္စိ၊ယေန ၀ိညူ ပရေ ဥပ ၀ဒေယျုံ။သုခိနောဝ ခေမိနော ဟောန္တု၊သဗ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ။
ရှေးရှေးသော ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့အပ်သော မကောင်းမှုမှန်သမျှ အသေးအမွှားလေးကအစ ဘာတစ်ခုမျှ မပြုလုပ်ပါစေကုန်လင့်၊ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန်ကွာ၍ ချမ်းသာကြပါစေသတည်း၊ ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာစွာ နေနိုင်ကြပါစေသတည်း၊
၆။ ယေ ကေစိ ပါဏဘူတတ္ထိ၊တသာ ၀ါ ထာဝရာဝ န၀သေသာ။ဒီဃာ ၀ါ ယေ၀ မဟန္တာ၊မဇ္ဈိမာ ရဿကာ အဏုက ထူလာ။
ထွက်သက်ဝင်သက် အသက်ရှုနေကြသော သတ္တ၀ါမှန်သမျှ၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်ကြသောရဟန္တာမဖြစ်ကြသေးသော သတ္တ၀ါများ၊ မကြောက်မရွံ့ တည်ကြည်ငြိမ်သက်ကြသော ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီးများ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှည်လျားသော သတ္တ၀ါ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားသော သတ္တ၀ါ၊ မရှည်မတို၊ မကြီး မသေး အလယ်အလတ်ဖြစ်ကြသော သတ္တ၀ါ၊ ခန္ဓာကိုယ် ဆူဖြိုးသောသတ္တ၀ါ၊ အားဖြင့် နောက်ဆုံး အဏုမြူတမျှ သေးငယ်ကုန်သော သတ္တ၀ါတွေအပါအ၀င် အားလုံးတို့သည် ဘေးရန်မရှိ ချမ်းသာပကတိရှိကြပါစေ …. ။
၇။ ဒိဋ္ဌာ ၀ါ ယေ၀ အဒိဋ္ဌာ၊ယေ၀ ဒူရေ ၀သန္တိ အ၀ိဒူရေ။ဘူတာဝ သမ္ဘဝေသီဝ၊သဗ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ။
မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သောမြင်ဖူးသောသတ္တ၀ါ၊ မမြင်နိုင်သော၊ မမြင်ဖူးသောသတ္တ၀ါ၊ ကျွနုပ် အဝေးမှာ ရှိနေသော၊ အနီးနားမှာ ရှိနေသော၊ မနီးမဝေးမှာ ရှိနေသောသတ္တ၀ါများ၊ နောင်ဘ၀မဖြစ်ရတော့သည့် ရဟန္တာစသော သူတော်ကောင်းတို့သည်၎င်း၊ နောင်ဘ၀ဖြစ်ကြအုံးမည့် ပုထုဇဉ် သေက္ခစသော သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည်၎င်း ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း …. ။
၈။ န ပရော ပရံ နိကုဗ္ဗေထ၊နာတိမညေထ ကတ္ထစိ န ကဉ္စိ။ဗျာရောသနာ ပဋိဃသည၊နာည မညဿ ဒုတ္ခ မိစ္ဆေယျ။
တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ယောက်ယောက်ကို၊ တိရိစ္ဆာန်တကောင်က တစ်ကောင်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မျှ၊ ဘယ်နေရာမှာမဆို၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်မကောင်းကြံခြင်း၊ မာန်မာနထောင်လွှားကာ မထီမဲ့မြင် မပြုကြပါစေလင့်။ကိုယ်နှုတ်တို့ဖြင့် စော်ကားပုတ်ခတ်ခြင်း၊ ဒေါသအာဃာတဖြင့် အချင်းချင်း သူတပါးဒုက္ခရောက်သည်ကို အလိုမရှိကြပါစေကုန်လင့် …. ။
၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတ္တ၊မာယုသာ ဧကပုတ္တ မနုရက္ခေ။ဧ၀မ္ပိ သဗ္ဗဘူတေသု၊မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။
တစ်ဦးတည်းသော သားရှိသော မိခင်သည် မိမိသားအပေါ် ဘေးရန်မကျရောက်အောင် အသက်ပေးကာ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးအနန္တများပြားလှသော မေတ္တာစိတ်ကို သတ္တ၀ါအားလုံးတို့အပေါ်တွင် ဖြန့်ကျက်နေနိုင်ကြပါစေ …. ။
၁၀။မေတ္တဉ္စ သဗ္ဗလောကသ္မိံ၊မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ဥဒ္ဓံ အဓော စ တိရိယဉ္စ၊အသမ္ဗာဓံ အဝေရ မသပတ္တံ။
အထက်ဘ၀ဂ် အရူပဗြဟ္မာ့ဘုံတိုင်အောင်၊ အောက်အ၀ီစိအပါယ်ဘုံတိုင်အောင်၊ အလယ်အလတ် လူ့ဘုံ၊ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ ရူပဗြဟ္မာ့ဘုံ အပါအ၀င် နေရာမလပ် အကျိုးအနန္တများပြားလှသော၊ အတိုင်းအဆပမာဏ မရေတွက်နိုင်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများနိုင်ကြပါစေ၊ အပိုင်းအခြားလွတ်ကင်း ကျဉ်းမြောင်းခြင်းမရှိ၊ ကိုယ်တွင်းဘေးရန်လဲ မရှိ၊ ပြင်ပရန်သူလဲ မရှိပဲ အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ကြပါစေသတည်း ….. ။
၁၁။ တိဋ္ဌံ စရံ နိသိန္နော ၀၊သယာနော ယာဝတာဿ ၀ီတမိဒ္ဓေါ။ဧတံ သတိံ အဓိဋ္ဌေယျ၊ဗြဟ္မ မေတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာဟု၊
ရပ်နေစဉ်၊ လမ်းလျောက်နေစဉ်၊ ထိုင်နေစဉ်၊ ခန္ဓာကိုယ်လဲလျောင်းနေစဉ် ဘယ်အချိန်မှာမဆို စိတ်ပျံ့လွင့်မှုကင်း ကြည်လင်ရွှင်ပြစွာဖြင့် မေတ္တာစိတ်နှင့်ယှဉ်သော သတိကို ထားနိုင်ကြပါစေ.. ထိုကဲ့သို့ မေတ္တာစိတ် ဖြန့်ကျက်ကာ နေခြင်းကိုပင် မြင့်မြတ်သော ဗြဟ္မာကြီးတို့၏ နေထိုင်ခြင်း ဗြဟ္မ၀ိဟာရဟူ၍ ပညာရှိအပေါင်းတို့ ဆိုကြပေ၏ …. ။
၁၂။ ဒိဋ္ဌိဉ္စ အနု ပဂ္ဂမ္မ၊သီလ၀ါ ဒဿနေန သမ္ပန္နော။ကာမေသု ၀ိနယ ဂေဓံ၊န ဟိ ဇာတု ဂ ဗ္ဘသေယျ ပုန ရေတိ။မေတ္တသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။
အမြဲမပြတ် မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းပွားများလေ့ ရှိသူသည်၊ အယူလွဲမှား ဖောက်ပြန်သောဘ၀သို့ မရောက်နိုင်တော့ပဲ လောကုတ္တရာ သီလများနှင့် ပြည့်စုံပြီး မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်များကိုပင်မျက်မှောက်ပြုရတတ်သည်၊ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ ၀တ္တုအာရုံ ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့၌ မက်မောတွယ်တာမှုများ ကင်းကွာကာ နောင်တဖန် ပဋိသန္ဓေတည်နေရခြင်း ဇာတိဒုက္ခကိုပင် မခံစားရတော့ပေ …. ။
(မေတ္တာသုတ် မြန်မာပြန်အဓိပ္ပါယ် ပြီးပါပြီ)
“မေတ္တာအကျိုး ( ၁၁ )မျိုး”
၁။ ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ပျော်ခြင်း၊
၂။ ရွှင်ရွှင်ပြပြ အိပ်ရာနိုးခြင်း၊
၃။ မကောင်းသော အိပ်မက်ဆိုးများ မမက်ခြင်း၊
၄။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများ၏ချစ်ခင်မှု ရရှိခြင်း၊
၅။ လူမှတပါး အခြားသော ပရလောကမှပုဂ္ဂိုလ်များ ချစ်ခင်ခြင်း၊
၆။ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော နတ်ဗြဟ္မာများ စောင့်ရှောက်မှု ခံရခြင်း၊၇။ မီးဘေး၊ အဆိပ်ဘေး၊ ဒုတ် ၊ ဓားလက်နက် မှန်သမျှ မထိရောက်နိုင်၊၈။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတခုခုကို အာရုံပြုလျင် စိတ်တည်ကြည် သမာဓိရလွယ်ခြင်း၊
၉။ မေတ္တာစိတ်ကြောင့် အမြဲတမ်း မျက်နှာကြည်လင်နေခြင်း၊
၁၀။ သေခါနီးဝယ် ကြည်ကြည်လင်လင် ရွှင်ရွှင်ပြပြ သေနိုင်ခြင်း၊
၁၁။ ယခုဘ၀တွင် မဂ်ဖိုလ်မရလျင်တောင် မေတ္တာဈာန်ဖြင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊
( မေတ္တာအကျိုး ဆောင်ပုဒ် )မေတ္တာဂုဏ်ရည် , ဆယ့်တစ်လီကား , အညီသတ္တ၀ါ , မလပ်ပါအောင် , ခါခါနေ့စဉ် , မေတ္တာယှဉ်မှု , ကြည်လင်အိပ်ပျော် ထချိန်တော်၍ , နိုးသော် ရွှင်ရွှင် , အိမ်မက်မြင်လည်း , အစဉ်ကောင်းစွာ , မြင်မက်ရာ၏ ။ ပြည်ရွာလူသား , နတ်အများလည်း , မြင်ကြားသမျှ , ချစ်ခင်ကြသဖြင့် , ဒေ၀ထွေထွေ စောင့်ရှောက်လေ၏ ။ မီး , ရေ , ခိုးသူ , များရန်သူလည်း , မယူမဖျက် , မနှောက်ယှက်တည်း ။ စိတ်ဓာတ်လည်းတည် , မျက်နှာကြည်၍ , သေမည်ခါချဉ်း , တွေဝေကင်း၏ ။ မှန်းရင်းဓမ္မ , မဂ်မရလည်း , ဈာန်ရလေလစ် , ဗြဟ္မာဖြစ်သည် … ဆယ့်တစ်မေတ္တာအကျိုးတည်း
“မေတ္တသုတ်တော်လာ လိုက်နာသင့်ဖွယ် ( ၁၅ )ချက်”
၁။ သက္ကောစ= တစိုက်မတ်မတ်စွမ်းနိုင်အောင် ပွားများအပ်၏၊
၂။ ဥဇု စ= ကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါး ရိုးသားဖြောင့်မတ်သင့်သည်၊
၃။ သုဟုဇု စ= သာမာန်မဟုတ်ပဲ အလွန်ကောင်းစွာ ဖြောင့်မတ်သင့်၏။
၄။ သုဝစော စ= ဆိုဆုံးမ လွယ်သူဖြစ်သင့်၏၊
၅။ မုဒု စ= စိတ်ထား နူးညံ့သိမ်မွေ့သင့်၏၊
၆။ အနတိမာနီ စ= ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်း၊ သူတပါးကို အထင်သေးခြင်း မာန်မာန မထားသင့်ရာ၊
၇။ သန္တုဿကော စ= ရောင့်ရဲလွယ်သင့်သည်၊
၈။ သုဘရော စ=အသက်မွေးမှုအတွက် မွေးမြူလွယ်သင့်သည်၊
၉။ အပ္ပကိစ္စော စ= အမှုကိစ္စ မှန်သမျှ နည်းပါးသင့်၏၊
၁၀။ သလ္လဟုက၀ုတ္တိ စ= ပေါ့ပါးသော အသက်မွေးခြင်းလဲ ရှိသင့်၏၊
၁၁။ သန္တိန္ဒြိယော စ= ငြိမ်သက်သော ဣနြေ္ဒရှိသင့်၏၊
၁၂။ နိပကော စ= ရင့်ကျက်သော တည်ငြိမ်သော ပညာဥာဏ်လဲ ရှိသင့်၏၊
၁၃။ အပ္ပဂဗ္ဘော= ကိုယ်နှုတ်နှလုံး ကြမ်းတမ်းခြင်း မရှိရာ။
၁၄။ ကုလေသု အနနု ဂိဒ္ဓေါ= အမျိုးလေးပါးတို့၌ တပ်မက်မှုမရှိသင့်ပေ၊
၁၅။ န စ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဉ္စိ – ဒုစရိုက်ကို အနည်းငယ်မျှလည်း မပြုကျင့်ရာ။
Special Thanks for your precious post – “ဗုဒ္ဓဘာသာစောင့်ရှောက်သူများအသင်း”
Credit to နှလုံးသားအာဟာရ
မတ်ေတာသုတျကို နားလညျပွီးမှ ရှတျရတာ ပိုအကြိုးရှိမယျထငျလို့ပါ
ဗုဒ်ဓဘာသာတိုငျး သိထားသငျ့သောမတ်ေတာသုတျ ၊ အဓိပ်ပါယျနဲ့ ပှားမြားခွငျး အကြိုးကြေးဇူးမြား နှငျ့မတ်ေတာသုတျကငျြ့သူမြား လိုကျနာရနျ မြားကို တငျပွ လိုကျပါတယျ ….. ။
၁။ယဿာနုဘာဝတော ယက်ခာ၊နဝေ ဒေဿန်တိ ဘီသနံ။ယဥှိ စဝေါနုယုဉ်ဇန်တော၊ရတ်တိန်ဒိဝ မတန်ဒိတော။
မတ်ေတသုတျပရိတျတျော၏ တနျခိုးရှိနျစျော အာနုဘျောကွောငျ့ ကွမျးတမျးခကျထနျသော ဘီလူး သရဲစသော နာနာဘာဝတို့သညျ မခွောကျလှနျ့နိုငျကွကုနျ၊ ယငျးသုတျကို နညေ့မပွတျ ရှတျဖတျသရဇ်စြာယျသောသူသညျ…
၂။ သုခံ သုပတိ သုတ်တော စ၊ပါပံ ကိဉ်စိ န ပဿတိ။ဧဝမာဒိ ဂုဏူပတေံ။ပရိတ်တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
ခမျြးသာစှာ အိပျပြျောခွငျး၊ အိပျနစေဉျလညျး အိပျမကျဆိုးမြား မမွငျမကျခွငျးစသော အကြိုးဂုဏျမြားရှိသောကွောငျ့ – အို သူတျောကောငျးအပေါငျးတို့ ငါတို့ ရှတျဆိုကွပါစို့…
၃။ကရဏီယ မတ်ထကုသလနေ၊ယန်တ သန်တံ ပဒံ အဘိသမစ်ေစ။သက်ကော ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊သုဝစော စဿ မုဒု အနတိမာနိ၊
အကြိုးစီးပှားလိုလား၍ လိမ်မာကြှမျးကငျြသောအမြိုးကောငျးသား၊ အမြိုးကောငျးသမီးတို့သညျ ငွိမျသကျအေးခမျြးသော နိဗ်ဗာနျ၏ ဂုဏျတို့ကို အာရုံပွုကာ ယခုကဲ့သို့မတ်ေတာပှားမှုကို ပွုသငျ့ပါပေ၏၊ ထိုသို့ မတ်ေတာပှားလိုသူသညျ တစိုကျမတျမတျစှမျးနိုငျအောငျ ပှားမြားအပျ၏၊ ကိုယျစိတျနှဈပါး ရိုးသားဖွောငျ့မတျသငျ့၏၊ အလှနျ ရိုးဖွောငျ့သူ ဖွဈသငျ့၏၊ ဆုံးမလှယျသူ၊ သူတပါး၏စကားကို နာခံလှယျသူဖွဈပွီး ကိုယျနှုတျနှလုံး သိမျမှကေ့ာ ကိုယျ့ကိုယျကို အထငျကွီးခွငျးမာနျမာနလဲ မထားသငျ့ပေ …. ။
၄။ သန်တုဿကော စ သုဘရော စ၊အပ်ပကိစ်စော စ သလ်လဟုကဝုတ်တိ။သန်တိန်ဒွိယော စ နိပကော စ၊အပ်ပဂဗ်ဘော ကုလသှေ န နုဂိဒ်ဓေါ။
စားသောကျစရာ၊ နစေရာအရာရာတို့တှငျ ရှိသမြှဖွငျ့ တငျးတိမျရောငျ့ရဲလှယျသူ ဖွဈသငျ့၏၊ ကိုယျ့ဝမျးတခါးအတှကျ လှယျလငျ့တကူပေ့ါပါးစှာ အသကျမှေးနိုငျသူလညျး ဖွဈသငျ့၏၊ အပိုဗာဟိရ ကိစ်စ နညျးပါးနိုငျသလောကျ ကငျြ့သုံးသငျ့၏၊ စိတျသှားတိုငျးကိုယျပါနသေကဲ့သို့ ဖွဈသငျ့၏၊ ထို့ပွငျသာမက မကျြစိ၊ နားစသော ဣန်ဒွငေါးပါးကို ထိနျးသိမျးသူ၊ တညျငွိမျရငျ့ကကျြသူ၊ ဉာဏျပညာဖွငျ့ ခငျြ့ခြိနျနိုငျသူလညျး ဖွဈသငျ့၏၊ ကိုယျ့နငျ့ဆကျစပျသော သူအားလုံးတို့အပျေါ၌ တှယျတာမနသေငျ့ပေ …. ။
၅။န စ ခုဒ်ဒ မာစရေ ကိဉ်စိ၊ယနေ ၀ိညူ ပရေ ဥပ ဝဒယြေုံ။သုခိနောဝ ခမေိနော ဟောန်တု၊သဗ်ဗသတ်တာ ဘဝန်တု သုခိတတ်တာ။
ရှေးရှေးသော ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့အပျသော မကောငျးမှုမှနျသမြှ အသေးအမှားလေးကအစ ဘာတဈခုမြှ မပွုလုပျပါစကေုနျလငျ့၊ သတ်တဝါအားလုံးတို့သညျ ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ဘေးရနျကှာ၍ ခမျြးသာကွပါစသေတညျး၊ ဘေးရနျကငျးကှာ ခမျြးသာစှာ နနေိုငျကွပါစသေတညျး၊
၆။ ယေ ကစေိ ပါဏဘူတတ်ထိ၊တသာ ၀ါ ထာဝရာဝ နဝသသော။ဒီဃာ ၀ါ ယဝေ မဟန်တာ၊မဇ်စြိမာ ရဿကာ အဏုက ထူလာ။
ထှကျသကျဝငျသကျ အသကျရှုနကွေသော သတ်တဝါမှနျသမြှ၊ ကွောကျရှံ့ထိတျလနျ့တတျကွသောရဟန်တာမဖွဈကွသေးသော သတ်တဝါမြား၊ မကွောကျမရှံ့ တညျကွညျငွိမျသကျကွသော ရဟန်တာမထရျေမွတျကွီးမြား၊ ခန်ဓာကိုယျရှညျလြားသော သတ်တဝါ၊ ခန်ဓာကိုယျကွီးမားသော သတ်တဝါ၊ မရှညျမတို၊ မကွီး မသေး အလယျအလတျဖွဈကွသော သတ်တဝါ၊ ခန်ဓာကိုယျ ဆူဖွိုးသောသတ်တဝါ၊ အားဖွငျ့ နောကျဆုံး အဏုမွူတမြှ သေးငယျကုနျသော သတ်တဝါတှအေပါအဝငျ အားလုံးတို့သညျ ဘေးရနျမရှိ ခမျြးသာပကတိရှိကွပါစေ …. ။
၇။ ဒိဋ်ဌာ ၀ါ ယဝေ အဒိဋ်ဌာ၊ယဝေ ဒူရေ ဝသန်တိ အဝိဒူရေ။ဘူတာဝ သမ်ဘဝသေီဝ၊သဗ်ဗသတ်တာ ဘဝန်တု သုခိတတ်တာ။
မကျြစိဖွငျ့ မွငျနိုငျသောမွငျဖူးသောသတ်တဝါ၊ မမွငျနိုငျသော၊ မမွငျဖူးသောသတ်တဝါ၊ ကြှနုပျ အဝေးမှာ ရှိနသေော၊ အနီးနားမှာ ရှိနသေော၊ မနီးမဝေးမှာ ရှိနသေောသတ်တဝါမြား၊ နောငျဘဝမဖွဈရတော့သညျ့ ရဟန်တာစသော သူတျောကောငျးတို့သညျ၎ငျး၊ နောငျဘဝဖွဈကွအုံးမညျ့ ပုထုဇဉျ သက်ေခစသော သတ်တဝါအားလုံးတို့သညျ၎ငျး ဘေးရနျကငျးကှာ ခမျြးသာကွပါစကေုနျသတညျး …. ။
၈။ န ပရော ပရံ နိကုဗ်ဗထေ၊နာတိမညထေ ကတ်ထစိ န ကဉ်စိ။ဗြာရောသနာ ပဋိဃသည၊နာည မညဿ ဒုတ်ခ မိစ်ဆယြေ။
တဈယောကျယောကျက တဈယောကျယောကျကို၊ တိရိစ်ဆာနျတကောငျက တဈကောငျကို ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့မြှ၊ ဘယျနရောမှာမဆို၊ စဉျးလဲကောကျကဈြမကောငျးကွံခွငျး၊ မာနျမာနထောငျလှားကာ မထီမဲ့မွငျ မပွုကွပါစလေငျ့။ကိုယျနှုတျတို့ဖွငျ့ စျောကားပုတျခတျခွငျး၊ ဒေါသအာဃာတဖွငျ့ အခငျြးခငျြး သူတပါးဒုက်ခရောကျသညျကို အလိုမရှိကွပါစကေုနျလငျ့ …. ။
၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတ်တ၊မာယုသာ ဧကပုတ်တ မနုရက်ခေ။ဧဝမ်ပိ သဗ်ဗဘူတသေု၊မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။
တဈဦးတညျးသော သားရှိသော မိခငျသညျ မိမိသားအပျေါ ဘေးရနျမကရြောကျအောငျ အသကျပေးကာ စောငျ့ရှောကျသကဲ့သို့ အကြိုးကြေးဇူးအနန်တမြားပွားလှသော မတ်ေတာစိတျကို သတ်တဝါအားလုံးတို့အပျေါတှငျ ဖွနျ့ကကျြနနေိုငျကွပါစေ …. ။
၁၀။မတ်ေတဉ်စ သဗ်ဗလောကသ်မိံ၊မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ဥဒ်ဓံ အဓော စ တိရိယဉ်စ၊အသမ်ဗာဓံ အဝရေ မသပတ်တံ။
အထကျဘဝဂျ အရူပဗွဟ်မာ့ဘုံတိုငျအောငျ၊ အောကျအဝီစိအပါယျဘုံတိုငျအောငျ၊ အလယျအလတျ လူ့ဘုံ၊ နတျပွညျခွောကျထပျ၊ ရူပဗွဟ်မာ့ဘုံ အပါအဝငျ နရောမလပျ အကြိုးအနန်တမြားပွားလှသော၊ အတိုငျးအဆပမာဏ မရတှေကျနိုငျသော မတ်ေတာစိတျကို ပှားမြားနိုငျကွပါစေ၊ အပိုငျးအခွားလှတျကငျး ကဉျြးမွောငျးခွငျးမရှိ၊ ကိုယျတှငျးဘေးရနျလဲ မရှိ၊ ပွငျပရနျသူလဲ မရှိပဲ အေးခမျြးစှာ နနေိုငျကွပါစသေတညျး ….. ။
၁၁။ တိဋ်ဌံ စရံ နိသိန်နော ၀၊သယာနော ယာဝတာဿ ဝီတမိဒ်ဓေါ။ဧတံ သတိံ အဓိဋ်ဌယြေ၊ဗွဟ်မ မတေံ ၀ိဟာရ မိဓ မာဟု၊
ရပျနစေဉျ၊ လမျးလြောကျနစေဉျ၊ ထိုငျနစေဉျ၊ ခန်ဓာကိုယျလဲလြောငျးနစေဉျ ဘယျအခြိနျမှာမဆို စိတျပြံ့လှငျ့မှုကငျး ကွညျလငျရှငျပွစှာဖွငျ့ မတ်ေတာစိတျနှငျ့ယှဉျသော သတိကို ထားနိုငျကွပါစေ.. ထိုကဲ့သို့ မတ်ေတာစိတျ ဖွနျ့ကကျြကာ နခွေငျးကိုပငျ မွငျ့မွတျသော ဗွဟ်မာကွီးတို့၏ နထေိုငျခွငျး ဗွဟ်မဝိဟာရဟူ၍ ပညာရှိအပေါငျးတို့ ဆိုကွပေ၏ …. ။
၁၂။ ဒိဋ်ဌိဉ်စ အနု ပဂ်ဂမ်မ၊သီလဝါ ဒဿနနေ သမ်ပန်နော။ကာမသေု ၀ိနယ ဂဓေံ၊န ဟိ ဇာတု ဂ ဗ်ဘသယြေ ပုန ရတေိ။မတ်ေတသုတ်တံ နိဋ်ဌိတံ။
အမွဲမပွတျ မတ်ေတာကမ်မဋ်ဌာနျး စီးဖွနျးပှားမြားလေ့ ရှိသူသညျ၊ အယူလှဲမှား ဖောကျပွနျသောဘဝသို့ မရောကျနိုငျတော့ပဲ လောကုတ်တရာ သီလမြားနှငျ့ ပွညျ့စုံပွီး မဂျဉာဏျဖိုလျဉာဏျမြားကိုပငျမကျြမှောကျပွုရတတျသညျ၊ သကျရှိ၊ သကျမဲ့ ဝတ်တုအာရုံ ကာမဂုဏျငါးပါးတို့၌ မကျမောတှယျတာမှုမြား ကငျးကှာကာ နောငျတဖနျ ပဋိသန်ဓတေညျနရေခွငျး ဇာတိဒုက်ခကိုပငျ မခံစားရတော့ပေ …. ။
(မတ်ေတာသုတျ မွနျမာပွနျအဓိပ်ပါယျ ပွီးပါပွီ)
“မတ်ေတာအကြိုး ( ၁၁ )မြိုး”
၁။ ခမျြးခမျြးသာသာ အိပျပြျောခွငျး၊
၂။ ရှငျရှငျပွပွ အိပျရာနိုးခွငျး၊
၃။ မကောငျးသော အိပျမကျဆိုးမြား မမကျခွငျး၊
၄။ ပတျဝနျးကငျြမှ လူမြား၏ခဈြခငျမှု ရရှိခွငျး၊
၅။ လူမှတပါး အခွားသော ပရလောကမှပုဂ်ဂိုလျမြား ခဈြခငျခွငျး၊
၆။ ဘုနျးတနျခိုးကွီးမားသော နတျဗွဟ်မာမြား စောငျ့ရှောကျမှု ခံရခွငျး၊၇။ မီးဘေး၊ အဆိပျဘေး၊ ဒုတျ ၊ ဓားလကျနကျ မှနျသမြှ မထိရောကျနိုငျ၊၈။ ကမ်မဋ်ဌာနျးတခုခုကို အာရုံပွုလငျြ စိတျတညျကွညျ သမာဓိရလှယျခွငျး၊
၉။ မတ်ေတာစိတျကွောငျ့ အမွဲတမျး မကျြနှာကွညျလငျနခွေငျး၊
၁၀။ သခေါနီးဝယျ ကွညျကွညျလငျလငျ ရှငျရှငျပွပွ သနေိုငျခွငျး၊
၁၁။ ယခုဘဝတှငျ မဂျဖိုလျမရလငျြတောငျ မတ်ေတာစြာနျဖွငျ့ ဗွဟ်မာ့ပွညျရောကျရှိနိုငျခွငျး၊
( မတ်ေတာအကြိုး ဆောငျပုဒျ )မတ်ေတာဂုဏျရညျ , ဆယျ့တဈလီကား , အညီသတ်တဝါ , မလပျပါအောငျ , ခါခါနစေ့ဉျ , မတ်ေတာယှဉျမှု , ကွညျလငျအိပျပြျော ထခြိနျတျော၍ , နိုးသျော ရှငျရှငျ , အိမျမကျမွငျလညျး , အစဉျကောငျးစှာ , မွငျမကျရာ၏ ။ ပွညျရှာလူသား , နတျအမြားလညျး , မွငျကွားသမြှ , ခဈြခငျကွသဖွငျ့ , ဒဝေထှထှေေ စောငျ့ရှောကျလေ၏ ။ မီး , ရေ , ခိုးသူ , မြားရနျသူလညျး , မယူမဖကျြ , မနှောကျယှကျတညျး ။ စိတျဓာတျလညျးတညျ , မကျြနှာကွညျ၍ , သမေညျခါခဉျြး , တှဝေကေငျး၏ ။ မှနျးရငျးဓမ်မ , မဂျမရလညျး , စြာနျရလလေဈ , ဗွဟ်မာဖွဈသညျ … ဆယျ့တဈမတ်ေတာအကြိုးတညျး
“မတ်ေတသုတျတျောလာ လိုကျနာသငျ့ဖှယျ ( ၁၅ )ခကျြ”
၁။ သက်ကောစ= တစိုကျမတျမတျစှမျးနိုငျအောငျ ပှားမြားအပျ၏၊
၂။ ဥဇု စ= ကိုယျနှုတျနှဈပါး ရိုးသားဖွောငျ့မတျသငျ့သညျ၊
၃။ သုဟုဇု စ= သာမာနျမဟုတျပဲ အလှနျကောငျးစှာ ဖွောငျ့မတျသငျ့၏။
၄။ သုဝစော စ= ဆိုဆုံးမ လှယျသူဖွဈသငျ့၏၊
၅။ မုဒု စ= စိတျထား နူးညံ့သိမျမှသေ့ငျ့၏၊
၆။ အနတိမာနီ စ= ကိုယျ့ကိုယျကို အထငျကွီးခွငျး၊ သူတပါးကို အထငျသေးခွငျး မာနျမာန မထားသငျ့ရာ၊
၇။ သန်တုဿကော စ= ရောငျ့ရဲလှယျသငျ့သညျ၊
၈။ သုဘရော စ=အသကျမှေးမှုအတှကျ မှေးမွူလှယျသငျ့သညျ၊
၉။ အပ်ပကိစ်စော စ= အမှုကိစ်စ မှနျသမြှ နညျးပါးသငျ့၏၊
၁၀။ သလ်လဟုကဝုတ်တိ စ= ပေါ့ပါးသော အသကျမှေးခွငျးလဲ ရှိသငျ့၏၊
၁၁။ သန်တိန်ဒွိယော စ= ငွိမျသကျသော ဣန်ဒွရှေိသငျ့၏၊
၁၂။ နိပကော စ= ရငျ့ကကျြသော တညျငွိမျသော ပညာဉာဏျလဲ ရှိသငျ့၏၊
၁၃။ အပ်ပဂဗ်ဘော= ကိုယျနှုတျနှလုံး ကွမျးတမျးခွငျး မရှိရာ။
၁၄။ ကုလသေု အနနု ဂိဒ်ဓေါ= အမြိုးလေးပါးတို့၌ တပျမကျမှုမရှိသငျ့ပေ၊
၁၅။ န စ ခုဒ်ဒ မာစရေ ကိဉ်စိ – ဒုစရိုကျကို အနညျးငယျမြှလညျး မပွုကငျြ့ရာ။
Special Thanks for your precious post – “ဗုဒ်ဓဘာသာစောငျ့ရှောကျသူမြားအသငျး”
ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှ သောင်းကျန်သူ ၇၆ ဦးနဲ့ လက်နက်များ ဖမ်းဆီးရမိထား ….
ကိုယ်ထဲတွင် အဆိပ်တောက် များနေပြီဟု သိနိုင်သော လက္ခဏာများ